Nrara nye Saint Rita maka ihe na - agaghị ekwe omume | Ilblogdellafede
Nkwuwa okwu na Santa Rita maka ihe na - agaghị ekwe omume
EKPERE MAKA EGO NA EGO NA-EBU EGO
Ezigbo Saint Rita, Onye Isi Nrute anyị, na - enweghị ike na Onye na - ekwuchitere ya n'ọnọdụ siri ike, ka Chineke gbapụta m na nhụjuanya m ugbu a ……. Maka nhụjuanya ị nwetara na ọtụtụ oge yiri nke a, nwee ọmịiko n’arụ onye m nyefere gị, onye ji obi ike rịọ maka itinye aka gị na obi Chukwu nke Jizọs Onye Kpamkpam. Ezigbo Saint Rita, duzie ebumnuche m n’ekpere ndi a di ume ala na oke arịrịọ m. Site n’ịhazigharị ndụ mmehie m gara aga ma nweta mgbaghara nke mmehie m niile, enwere m olileanya dị ụtọ nke otu ụbọchị iso gị nọrọ n’eluigwe na Chineke ịnọ ruo mgbe ebighi ebi. Ka ọ dịrị.
Saint Rita, patroness nke nsogbu siri ike, kpee ekpere maka anyị.
Saint Rita, onye na-akwado ikpe ndị na-agaghị ekwe omume, na-arịọchitere anyị arịrịọ.
N’okpuru ibu na nhụjuanya nke ihe mgbu, gị bụ ndị niile na-akpọ Senti nke ndị agaghị ekwe omume, enwere m obi ike nke napụtara ya n’oge na-adịghị anya. Biko tọhapụ obi m dara ogbenye, site na ahụhụ na-emekpa ya ebe niile, ma weghachi mmụọ dị nwayọ, nke jupụtara na nchekasị. Ma ebe uzọ nile n’enweta enyemaka abaghị uru, ana m atụkwasị gị obi na ọ bụ gị ka Chineke họpụtara maka ịgbagide ikpe dị oke egwu. Ọ bụrụ na ha bụ ihe mgbochi nye mmezu nke ọchịchọ m, mmehie m, nweta nchegharị na mgbaghara mmehie sitere na Chineke. Ekwekwala, ka ọ kwụsị, ịkwapụ ilu nke obi ilu, nyeghachi olile anya m guzosiri ike, m ga-emekwa ka ihe ọmụma banyere ebere gị dị ukwuu ebe niile nye mkpụrụ obi ndị e wedara n’ala. Ezigbo nwunye nke Crucifix, na-arịọchite arịrịọ ugbu a na oge niile maka mkpa m.
EKPERE SI SANTA RITA KA EGO SITERE N’IHU OZI
O Chineke, onye dere udo na nlekọta ịhụnanya nke ọrụ ebere, lelee obi ebere na ezi na ụlọ anyị. Lee, O Onye-nwe, lee ugboro ole ọ dị n’esemokwu na otu udo si na-efepu ya. Meere anyị ebere. Ka udo lọghachi, n’ihi na naanị ị ga - enye ya anyị. O Jizọs, Eze nke udo, gee anyị ntị maka amara nke Mary Kachasị Nsọ, Nwanyị Udo, yana kwa maka odibo gị kwesịrị ntụkwasị obi, Saint Rita, onye ji oke ọrụ ebere na ọ sweetụ gọzie gị nke na ị bụ mmụọ ozi udo ebe ọ bụla ị hụrụ na a ga-enwe ọgbaghara. Ma gi onwe gi, Saint di nma, kpee ekpere ka anyi nweta amara a n’aka Onye nwe anyi na ezin’ulo niile n’enwe nsogbu. Amen.
EKPERE MAKA BRITE NA SANTA RITA
O Saint Saint Rita dị ebube, n’agbanyeghi na ị lụrụ irubere ndị mụrụ gị isi, ị ghọrọ ọmarịcha nwanyị na nwanyị Kristi na ezigbo nne. Nweta enyemaka Chineke n’onwe m, ka m wee bie ezigbo alụm. Kpee ekpere ka m nwee ume iji kwado Chineke na di m. Lekọta anyị, maka ụmụaka nke Onye-nwe ga-achọ inye anyị, nke nkwa dị iche iche anyị ga-eche ihu. Ekwekwala ka ihe ọ bụla gbochie nkwekọrịta anyị. Ndi mo-ozi nke udo nyere aka n’ebe obibi anyi, wepu echiche ma mekwaa ka nghọta na ihunanya na-eme ka nkpuru obi gbaputara site n’ọbara nke Jisos .. Nye gi ihe ahu, obuna site na ario gi, otu ubochi anyi biara n’eto Chineke n’elu igwe. na ala eze nke ihunanya ebighebi.
O Saint Saint Rita dị ebube, site na nrube isi nye ndị mụrụ gị, i doro onwe gị n'okpuru ọnọdụ ịlụ di ma ọ bụ nwunye, ma gosipụta onwe gị dịka ezigbo nwanyị nke nwanyị lụrụ nwanyị dị ka ezigbo Onye Kraịst. Lee, a no m n’ukwu gi iji meghere gi obi m, enyemaka nke Chineke na nchedo gi. Gị onwe gị tara ahụhụ na alụm di na nwunye, nwetere m ike dị mkpa iji wee na-ekwesi ntụkwasị obi nye di m. Lekọta ndị anyị, doo ọrụ anyị nsọ, gọzie ọrụ anyị niile, ka ihe ọ bụla wee laghachi n'ebube Chineke na uru anyị. O nweghi ihe na-emebi mmekọrịta anyị. Ka ụlọ anyị mee nke ọma, O S. Rita; ka ndị mmụọ ozi nke udo nyere gị aka, hapụ arụmụka nile jọgburu onwe ya, ka ọrụ ebere bụrụ nke kachasị mma, na ịhụnanya nke jikọtara obi abụọ, nke jikọtara mkpụrụ obi abụọ gbapụtara site n'ọbara nke Jizọs dịkarịsịrị ọcha, anaghị ada ada. , ekpere a nye Jaa, ka mu na di m bia otu ubochi ito Chineke n’elu igwe. Amen.
EKPERE NIILE N’AKA MAKA
Mgbe amụrụ gị, Saint Sita, i nwere aha ihe atụ nke ugwu bara nnukwu uru na ifuru. Lee m anya ọma na m na-achọ ịbụ nne. Gi onwe-gi buru kwa nne nke umu abua, onye nke i huru n’anya ma ku kwa ya dika nne di nsọ puru ime. Kpee ekpere ka Chineke nye m amara nke nwa ahụ, onye anyị na di m na-echere dị ka onyinye sitere n’eluigwe. Dịka ugbu a anyị na-enye ya obi dị nsọ nke Jizọs na Meri ma anyị nyefere ya nchekwa gị. Ka e mee ọlu ebube nke ndu ohuru Chineke gọziri agọzi.
O Mbufo di omimi, nne nke Jisos na nne m, site na ario nke Saint Rita, nyerem aka n’oru di nma ma di uku. Ọ bụ gị ka m tụkwasịrị obi, nne, ụmụ m hụrụ n’anya nke ukwuu na ndị nke m na-eche maka ya, enwere m olileanya ma na-a .ụrị ọ .ụ. Kụziere m iji ụzọ dị mma mee ka ha duzie ha dị ka Saint Rita, meekwa ka m nwee mmetụta dị nro na adịghị ike na adịghị ike. Nweta m ndidi ndidi ahụ nke na-agwụ ike ma na-enye ma na-anagide maka nzọpụta ebighi ebi nke ihe ndị o kere eke. Nyere m aka, nne. Zụlite obi m n’oyiyi nke gị ma mee ka ụmụ m hụ nke ọma n’ime omume gị, nke mere na, mgbe ha mụtasịrị m ka m hụ gị n’anya ma soro gị na ndụ a, ha ga-abịa otu ụbọchị iji too gị wee gọzie gị n’eluigwe. Mary, Nwanyị nke Ndị Nsọ, ị nwekwara nchekwa nke Saint Rita maka ụmụ m.
EKPERE SI S. RITA, OZI NIILE
Saint Rita nke Cascia, ihe nlere di na nwunye, ndi nne na ezinulo na nke okpukperechi, ana m ariri ariri arịrịọ gi n’oge nkem siri ike nke ndu m. Knowmara na mwute na-echifukarị m iwe, maka na enweghị m ike isi ụzọ mgbapụ n'ọtụtụ ọnọdụ mgbu, ma ihe onwunwe ma nke mmụọ. Nweta m site n’aka Onye-nwe ihe m chọrọ, ọkachasị ntụkwasị obi ntụkwasị obi n’ebe Chineke nọ na ịdị jụụ nke obi m. Kwadoro m ka m imitateomi ịdị nwayọ gị, ike gị na ọnwụnwa na ọrụ ebere gị dị ike ma jụọ Onye-nwe na ahụhụ m nwere ike ịbara ndị m hụrụ n'anya niile uru, na enwere ike ịzọpụta mmadụ niile ruo mgbe ebighi ebi.
← Na post gara aga Gara aga post:Anya mmiri nke Madonna n’ụlọ Bettina Jamundo
Ọzọ Post → Post ozo:Vatican: enweghị nchegbu 'maka ahụike Benedict XVI